ကားလုပ်ငန်းကို ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းများ ရှာဖွေနေတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ
ထိုင်းနိုင်ငံတွေ ထုတ်လုပ်သည့် Toyota pickup truck ကို နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ဆောင်ရန် သင်္ဘောပေါ် မတင်ခင် တွေ့မြင်ရစဉ် (Photo by Nozomu Ogawa)
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေဟာ ကားတင်သွင်းမှု ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့ အခွန်အခ အကျိုးအမြတ် တွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ ပြောင်းရွေ့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပါတယ်။
ဘန်ကောက်/ဂျာကာတာ မှလာသော သတင်းများအရ ပြီးခဲ့သောနှစ်ကုန်ပိုင်းအတွင်း Auto Duties များကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံအချို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ကားတင်သွင်းမှုတွေကနေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ကားလုပ်ငန်းတွေကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနေကြတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံခြားမှ ကားတင်သွင်းရောင်းချမှု ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာပဲ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာတော့ ကားတင်သွင်းမှု ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုရဲ့ အကျိုးအမြတ် နှစ်မျိုးစလုံးကို မိတ်ဆက် တိုင်းတာပြသခဲ့ပြီးပါပြီ။ နိုင်ငံတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကုန်သွယ်မှုလိုငွေကို လျော့ချဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့အပြင် စီးပွားရေးကို ရေတိုခိုင်မာအားကောင်းစေဖို့ ဆောင်ရွက်နေကြတာဟာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအသစ်တစ်ခုလိုတောင် ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ အရှေ့တောင်အာရှ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရဲ့ အရွေ့ဟာ ရေရှည်မှာ အားနည်းနေနိုင်သေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတော့ နိုင်ငံခြားက ကားတင်သွင်းသူတွေဟာ နိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေးအပေါ် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှုကိုအခြေခံပြီး ကားတင်သွင်းမှုအရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့် တင်သွင်းမှုကန့်သတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကို မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်မှုနည်းသူတွေ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံအတွင်းသို့ ကားတင်သွင်းရန်အတွက် နိုင်ငံအတွင်းကနေ ကားတင်ပို့မှုနည်းသူ ကုမ္ပဏီတွေအတွက်တော့ တော်တော်လေး အခက်အခဲတွေ့နိုင်တာပါ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ အစိုးရဟာ အင်ဂျင်ပါဝါ3liters နဲ့အထက်ကားတွေကို ဖယ်ရှားခြင်းနဲ့အတူ နိုင်ငံတွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း ပါမစ်ကိုပါ ရပ်ဆိုင်းပစ်ဖို့ရှိနေသေးတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွင်း ဘယ်ကားထုတ်လုပ်သူမှ ဒီလို အရွယ်အစားကားတွေကို ထုတ်လုပ်ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် နို်င်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးရာရောက်သလို ရူပီယာ တန်ဖိုးလျော့ကျမှုကိုလည်း ကုန်သွယ်မှုလိုငွေကို လျော့ချခြင်းအားဖြင့် ထိန်းချုပ်ရာလည်း ရောက်စေနိုင်တယ်။
ဂျပန်ကားထုတ်လုပ်သူတွေဟာ အင်ဒိုနီးရှား ကား ဈေးကွက်ရဲ့ ၉ဝ% ကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး အရှေ့တောင် အာရှအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၈ဝ% ကို ထိန်းချုပ်ထားကြတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ဒေသတွင်း ဒုတိယအကြီးဆုံး ကားထုတ်လုပ်မှု ဗဟိုတစ်ခုဖြစ်ပြီး minivans တွေနဲ့ ကားအငယ်စားတွေကို များစွာထုတ်လုပ်နေကြတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ အခြား မော်ဒယ်တွေဖြစ်တဲ့ sedans တွေနဲ့ pickup trucks တွေကိုတော့ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ ထိပ်တန်းကားထုတ်လုပ်မှု လမ်းဆုံဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ တင်သွင်းကြတာပါ။
တင်သွင်းမှု ကန့်သတ်ချက်တွေဟာ နိုင်ငံအတွင်း အရောင်းတွေကို ထိခိုက်မှုရှိလိမ့်မယ်။ "ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်စွမ်းကို လေ့လာနေပါတယ်" ဆိုပြီး အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ကားထုတ်လုပ်သူ Toyota Motor ရဲ့ အမှုဆောင်က ပြောကြားခဲ့တယ်။
မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် Mahathir Mohamad ကတော့ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကားထုတ်လုပ်သူတွေကို မြင့်တင်ပေးသလို ကားတင်သွင်းမှု ကန့်သတ်ခြင်းတွေမှာလည်း မျောပါလာသူပါ။ သူက "ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ တိကျတဲ့ အခြေအနေတွေကို လေ့လာဖို့လိုတယ်။ ဒါမှလည်း နိုင်ငံခြားက ကားတွေဟာ နိုင်ငံအတွင်း အလွယ်တကူ မဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Proton နဲ့နိုင်ငံတွင်းကထုတ်တဲ့ကားတွေဟာ နိုင်ငံအတွင်းဈေးကွက်ကို စိုးမိုးနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ပေးရာလည်း ရောက်မှာပါ" လို့ ဂျူလိုင်လအတွင်း ပြောကြားခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းက အရှေ့တောင်အာရှမှာ ကားအစီးရေ ၄ သန်းလောက် ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ၈ဝ% က ထိုင်းနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး မလေးရှားလိုမျိုး ဒေသတွင်း အခြားနိုင်ငံတွေကို တင်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတွေမှာ Toyota Motor နဲ့ Mitsubishi ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်တာကတော့ ထိုင်းနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာပါ။
မလေးရှားနိုင်ငံဟာ ပြည်တွင်းကားထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ ပြည်ပကိုအဓိကတင်ပို့သူတွေ ဖြစ်မလာသေးတာတောင်မှ Proton လိုမျိုးပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီတွေကို အခွန်အခ ဖြတ်တောက်ပေးခြင်းနဲ့ သုတေသနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အကူအညီပေးခြင်း စတဲ့ ကူညီမှုတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ ကားတင်သွင်းမှုတွေဟာ ပြည်တွင်းဖြစ် ကားထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ ကြီးထွားလာတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ဓါးပြတိုက်နေတယ်လို့ မှတ်ယူထားတဲ့ပုံရတဲ့ Mahathir ဟာ အထူးသဖြင့် ဒေသတွင်းခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာ သူတိုနိုင်ငံရဲ့ ကားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို ချဲ့ထွင်လိုသူပါ။
အရှေ့တောအာရှ နိုင်ငံများ အစည်းအရုံးဟာ ASEAN Economic Community ကို ၂ဝ၁၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို ပိုမိုထိရောက်အောင် ဆောက်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ၂ဝ၁၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းကတည်းက auto duties တွေကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ တစ်ခု လိုနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာ စည်းကြပ်ခွန်မဟုတ်တဲ့ အတားအဆီးတွေ (non-tariff barriers) ပြုလုပ်ထားတာကတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆို ကုန်သွယ်မှုကို လျော့ကျစေတာပါ။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကတော့ ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာပဲ ဒီလိုမူဝါဒတွေကို ထုတ်ပြန်ဖို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်လာပြီးနိုင်ငံအတွင်းသို့ တင်သွင်းမယ့် ကားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မူရင်းနို်င်ငံက အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာ တရားဝင်အထောက်အထားတွေပါလာဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး ကားကို ကမ်းပေါ်ချအပြီးမှာလည်း အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေကို ခံယူဖို့ လိုအပ်လာတယ်။ ကားထုတ်လုပ်သူတွေကတော့ ဗီယက်နမ်ဘက်က ဒီလိုမျိုး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို စည်းကြပ်ခွန်မဟုတ်တဲ့ အတားအဆီးတွေလို့ခေါ်ပြီး မလုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပေမယ့် အစိုးရကတော့ ဘာမှတုန့်ပြန်ခြင်း ရှိခဲ့ဘူး။ တင်သွင်းမှုတွေကတော့ ဂျူလိုင်လထိ ရပ်ဆိုင်းလုနီးနီးဖြစ်နေခဲ့တယ်။
Toyota ကတော့ compact ကားတွေကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအတွင်း တပ်ဆင်ရောင်းချနိုင်ပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် pickup trucks တွေ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံထုတ် sports ကားတွေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် Lexus အမှတ်တံဆိပ်လိုမျိုး ဇိမ်ခံကား တွေကို တင်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့တာဟာ ဥပမာတစ်ခုပါ။
ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့ ဟနွိုင်းကို ကားစစ်ဆေးမှုတွေကို ထိုင်းမှာလာလုပ်ဖို့ သြဂုတ်လအတွင်း ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ထိုင်းနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို ကားတင်ပို့မှုတွေ သြဂုတ်လအတွင်းမှပဲ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုန်ချအပြီး စစ်ဆေးမှုတွေကတော့ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့အပြင် စစ်ဆေးချိန်ကလည်း တစ်လလောက်ကြတတ်တာဟာ တင်ပို့မှုတွေကို အဟန့်အတားဖြစ်စေဆဲပါပဲ။
ဒီလိုအချိန်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ ပြည်တွင်းကနေထုတ်လုပ်တဲ့ hybrids တွေ၊ လျှပ်စစ်ကားတွေနဲ့ အခြား လျှပ်စစ်နယ်ပယ်ကကားတွေအတွက် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက အခွန်လွတ်ငြိမ်းခွင့်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးသား။ ဒီနေရာမှ အချို့သော အဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ မော်တာနဲ့ လျှပ်စစ်ဘက်ထရီတွေကိုတော့ ပြည်တွင်းကနေပဲ ထုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို အတိုင်းအတာတွေဟာ ကားတင်သွင်းမှုတွေအတွက်တော့ ဆိုးကျိုးဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေဟာ ကားတင်သွင်းမှု ကန့်သတ်ရေးအပါအဝင် စေ့စေ့စပ်စပ်ဆွေးနွေးခြင်းအဆင့်မှာရှိနေပြီး မကြာမီထွက်ပေါ်လာတော့မှာပါ။ U.S. ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့ကတော့ ဂျပန်ကားလုပ်ငန်းမှာလည်း စည်းကြပ်ခွန်မဟုတ်တဲ့ အတားအဆီး အချို့ သတ်မှတ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီး မတ်လအတွင်းက ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
"အမျိုးသားကောင်းစားရေး ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒကို လွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် နောက်ဆုံးမှာ တစ်သီးပုဂ္ဂလအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ရော ASEAN ဒေသတွင်းတစ်ခုလုံးပါ မော်တော်ကားလုပ်ငန်း ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပိုင်းပိုင်းကွဲတာတွေ အကျိုးထိရောက်မှုမရှိတာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ကြရလိမ့်မယ်" လို့ Oxford စီးပွားရေးမှ ဗြိတိသျှ သုတေသန ကုမ္ပဏီကနေပြီး ASEAN ဒေသတွင်း မော်တော်ကားလုပ်ငန်းမှ စည်းကြပ်ခွန်မဟုတ်တဲ့ အတားအဆီးတွေ ဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေသတွင်းက ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ သတိပေးမှုတွေကို မကြားဟန်ဆောင်နေဆဲပါပဲ။
(ယခုသတင်းဆောင်းပါးမှာ Nikkei Asia တွင် ဖော်ပြထားသည့် Southeast Asia seeks ways to protect car industry? ဆောင်းပါးကို CarsDB ၏ managing editor ဦးစည်သူကျော်မှ ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ် ပါသည်။)
အရှေ့တောငျအာရှ နိုငျငံတှဟော ကားတငျသှငျးမှု ထိနျးခြုပျလိုကျခွငျးနဲ့ အခှနျအခ အကြိုးအမွတျ တှကေို ပေါငျးစပျပွီး ပွညျတှငျးလုပျငနျးကို အထောကျအကူဖွဈစဖေို့ ပွောငျးရှေ့ကွိုးပမျးလကျြရှိနပေါတယျ။
ဘနျကောကျ/ဂြာကာတာ မှလာသော သတငျးမြားအရ ပွီးခဲ့သောနှဈကုနျပိုငျးအတှငျး Auto Duties မြားကို ရုတျသိမျးခဲ့ပွီးနောကျ အရှေ့တောငျအာရှနိုငျငံအခြို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ကားတငျသှငျးမှုတှကေနေ ပျေါပေါကျလာတဲ့ ကားလုပျငနျးတှကေို အကာအကှယျပေးနိုငျဖို့ နညျးလမျးတှကေို ရှာဖှနေကွေတယျ။
မလေးရှားနိုငျငံဟာ နိုငျငံခွားမှ ကားတငျသှငျးရောငျးခမြှု ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ဖွဈနိုငျခွမြေားကို ရှာဖှနေတေဲ့အခြိနျမှာပဲ အငျဒိုနီးရှား၊ ဗီယကျနမျနဲ့ ထိုငျးနိုငျငံတှမှောတော့ ကားတငျသှငျးမှု ထိနျးခြုပျခွငျးနဲ့ ပွညျတှငျးထုတျလုပျမှုရဲ့ အကြိုးအမွတျ နှဈမြိုးစလုံးကို မိတျဆကျ တိုငျးတာပွသခဲ့ပွီးပါပွီ။ နိုငျငံတှဟော သူတို့ရဲ့ ကုနျသှယျမှုလိုငှကေို လြော့ခဖြို့ ကွိုးစားနကွေတဲ့အပွငျ စီးပှားရေးကို ရတေိုခိုငျမာအားကောငျးစဖေို့ ဆောငျရှကျနကွေတာဟာ ခတျေရစေီးကွောငျးအသဈတဈခုလိုတောငျ ဖွဈနတောပါ။ ဒါပမေယျ့ ကြှမျးကငျြသူတှကေတော့ အရှေ့တောငျအာရှ မျောတျောယာဉျလုပျငနျးရဲ့ အရှေ့ဟာ ရရှေညျမှာ အားနညျးနနေိုငျသေးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံကတော့ နိုငျငံခွားက ကားတငျသှငျးသူတှဟော နိုငျငံအတှငျး စီးပှားရေးအပျေါ အထောကျအပံ့ပေးနိုငျမှုကိုအခွခေံပွီး ကားတငျသှငျးမှုအရအေတှကျကို ကနျ့သတျခွငျးအားဖွငျ့ တငျသှငျးမှုကနျ့သတျခွငျးအစီအစဉျကို မကွာသေးမီက ထုတျပွနျခဲ့တယျ။ ဒီလိုလုပျဆောငျခွငျးဟာ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံအတှငျး ထုတျလုပျမှုနညျးသူတှေ ဒါမှမဟုတျ နိုငျငံအတှငျးသို့ ကားတငျသှငျးရနျအတှကျ နိုငျငံအတှငျးကနေ ကားတငျပို့မှုနညျးသူ ကုမ်ပဏီတှအေတှကျတော့ တျောတျောလေး အခကျအခဲတှေ့နိုငျတာပါ။ နောကျတဈခကျြကတော့ အစိုးရဟာ အငျဂငျြပါဝါ3liters နဲ့အထကျကားတှကေို ဖယျရှားခွငျးနဲ့အတူ နိုငျငံတှငျးသို့ တငျသှငျးခွငျး ပါမဈကိုပါ ရပျဆိုငျးပဈဖို့ရှိနသေးတယျ။ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံအတှငျး ဘယျကားထုတျလုပျသူမှ ဒီလို အရှယျအစားကားတှကေို ထုတျလုပျရတော့မှာ မဟုတျဘူး။ ဒီလိုလုပျဆောငျခွငျးအားဖွငျ့ နိုငျငံအတှငျး ထုတျလုပျမှုကို အားပေးရာရောကျသလို ရူပီယာ တနျဖိုးလြော့ကမြှုကိုလညျး ကုနျသှယျမှုလိုငှကေို လြော့ခခြွငျးအားဖွငျ့ ထိနျးခြုပျရာလညျး ရောကျစနေိုငျတယျ။
ဂပြနျကားထုတျလုပျသူတှဟော အငျဒိုနီးရှား ကား ဈေးကှကျရဲ့ ၉ဝ% ကို ထိနျးခြုပျထားပွီး အရှေ့တောငျ အာရှအနနေဲ့ ကွညျ့မယျဆိုရငျ ၈ဝ% ကို ထိနျးခြုပျထားကွတယျ။ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံဟာ ဂပြနျကားကုမ်ပဏီတှရေဲ့ ဒသေတှငျး ဒုတိယအကွီးဆုံး ကားထုတျလုပျမှု ဗဟိုတဈခုဖွဈပွီး minivans တှနေဲ့ ကားအငယျစားတှကေို မြားစှာထုတျလုပျနကွေတဲ့ နိုငျငံဖွဈတယျ။ အခွား မျောဒယျတှဖွေဈတဲ့ sedans တှနေဲ့ pickup trucks တှကေိုတော့ ဂပြနျနိုငျငံနဲ့ ထိပျတနျးကားထုတျလုပျမှု လမျးဆုံဖွဈတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံကနေ တငျသှငျးကွတာပါ။
တငျသှငျးမှု ကနျ့သတျခကျြတှဟော နိုငျငံအတှငျး အရောငျးတှကေို ထိခိုကျမှုရှိလိမျ့မယျ။ "ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ အကြိုးသကျရောကျနိုငျစှမျးကို လေ့လာနပေါတယျ" ဆိုပွီး အငျဒိုနီးရှားရဲ့ ရောငျးအားအကောငျးဆုံး ကားထုတျလုပျသူ Toyota Motor ရဲ့ အမှုဆောငျက ပွောကွားခဲ့တယျ။
မလေးရှား ဝနျကွီးခြုပျ Mahathir Mohamad ကတော့ နိုငျငံအတှငျးရှိ ကားထုတျလုပျသူတှကေို မွငျ့တငျပေးသလို ကားတငျသှငျးမှု ကနျ့သတျခွငျးတှမှောလညျး မြောပါလာသူပါ။ သူက "ကြှနျတျောတို့ဟာ ဖွဈလာနိုငျဖှယျရှိတဲ့ တိကတြဲ့ အခွအေနတှေကေို လေ့လာဖို့လိုတယျ။ ဒါမှလညျး နိုငျငံခွားက ကားတှဟော နိုငျငံအတှငျး အလှယျတကူ မဝငျရောကျနိုငျမှာဖွဈပွီး Proton နဲ့နိုငျငံတှငျးကထုတျတဲ့ကားတှဟော နိုငျငံအတှငျးဈေးကှကျကို စိုးမိုးနိုငျဖို့ အခှငျ့အရေး ပေးရာလညျး ရောကျမှာပါ" လို့ ဂြူလိုငျလအတှငျး ပွောကွားခဲ့တယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့နှဈအတှငျးက အရှေ့တောငျအာရှမှာ ကားအစီးရေ ၄ သနျးလောကျ ထုတျလုပျခဲ့ကွတယျ။ ၈ဝ% က ထိုငျးနဲ့ အငျဒိုနီးရှားမှာ ထုတျလုပျတာဖွဈပွီး မလေးရှားလိုမြိုး ဒသေတှငျး အခွားနိုငျငံတှကေို တငျပို့ခဲ့ကွတယျ။ မလေးရှား၊ ဖိလဈပိုငျနဲ့ ဗီယကျနမျ နိုငျငံတှမှော Toyota Motor နဲ့ Mitsubishi ကားထုတျလုပျရေးလုပျငနျးတှရှေိကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ အကွီးအကယျြထုတျလုပျတာကတော့ ထိုငျးနဲ့ အငျဒိုနီးရှားမှာပါ။
မလေးရှားနိုငျငံဟာ ပွညျတှငျးကားထုတျလုပျသူတှအေနနေဲ့ ပွညျပကိုအဓိကတငျပို့သူတှေ ဖွဈမလာသေးတာတောငျမှ Proton လိုမြိုးပွညျတှငျး ကုမ်ပဏီတှကေို အခှနျအခ ဖွတျတောကျပေးခွငျးနဲ့ သုတသေနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးလုပျငနျးတှမှော အကူအညီပေးခွငျး စတဲ့ ကူညီမှုတှဆောငျရှကျလကျြရှိတယျ။ ကားတငျသှငျးမှုတှဟော ပွညျတှငျးဖွဈ ကားထုတျလုပျသူတှရေဲ့ ကွီးထှားလာတဲ့ အခှငျ့အရေးတှကေို ဓါးပွတိုကျနတေယျလို့ မှတျယူထားတဲ့ပုံရတဲ့ Mahathir ဟာ အထူးသဖွငျ့ ဒသေတှငျးခေါငျးဆောငျတှကွေားမှာ သူတိုနိုငျငံရဲ့ ကားထုတျလုပျမှုလုပျငနျးကို ခြဲ့ထှငျလိုသူပါ။
အရှေ့တောအာရှ နိုငျငံမြား အစညျးအရုံးဟာ ASEAN Economic Community ကို ၂ဝ၁၅ နှဈကုနျပိုငျးမှာဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး ဒသေတှငျး စီးပှားရေး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုတှကေို ပိုမိုထိရောကျအောငျ ဆောကျရှကျလကျြရှိတယျ။ ဗီယကျနမျ၊ လာအို၊ မွနျမာနဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံတှမှောတော့ ၂ဝ၁၇ နှဈကုနျပိုငျးကတညျးက auto duties တှကေို ရုတျသိမျးပေးဖို့ တဈခု လိုနပေါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒသေတှငျးနိုငျငံတှဟော စညျးကွပျခှနျမဟုတျတဲ့ အတားအဆီးတှေ (non-tariff barriers) ပွုလုပျထားတာကတော့ ဘယျလိုနညျးနဲ့မဆို ကုနျသှယျမှုကို လြော့ကစြတောပါ။
ဗီယကျနမျနိုငျငံကတော့ ဒီနှဈအစောပိုငျးမှာပဲ ဒီလိုမူဝါဒတှကေို ထုတျပွနျဖို့ ပထမဆုံးအနနေဲ့ လုပျဆောငျလာပွီးနိုငျငံအတှငျးသို့ တငျသှငျးမယျ့ ကားတှဟော သူတို့ရဲ့ မူရငျးနိုငျငံက အရညျအသှေးပိုငျးဆိုငျရာ တရားဝငျအထောကျအထားတှပေါလာဖို့ လိုအပျမှာဖွဈပွီး ကားကို ကမျးပျေါခအြပွီးမှာလညျး အာဏာပိုငျတှရေဲ့ စဈဆေးမှုတှကေို ခံယူဖို့ လိုအပျလာတယျ။ ကားထုတျလုပျသူတှကေတော့ ဗီယကျနမျဘကျက ဒီလိုမြိုး စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို စညျးကွပျခှနျမဟုတျတဲ့ အတားအဆီးတှလေို့ချေါပွီး မလုပျဆောငျဖို့တောငျးဆိုခဲ့ကွပမေယျ့ အစိုးရကတော့ ဘာမှတုနျ့ပွနျခွငျး ရှိခဲ့ဘူး။ တငျသှငျးမှုတှကေတော့ ဂြူလိုငျလထိ ရပျဆိုငျးလုနီးနီးဖွဈနခေဲ့တယျ။
Toyota ကတော့ compact ကားတှကေို ဗီယကျနမျနိုငျငံအတှငျး တပျဆငျရောငျးခနြိုငျပမေယျ့ ထိုငျးနိုငျငံထုတျ pickup trucks တှေ၊ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံထုတျ sports ကားတှနေဲ့ ဂပြနျနိုငျငံထုတျ Lexus အမှတျတံဆိပျလိုမြိုး ဇိမျခံကား တှကေို တငျသှငျးနိုငျခွငျးမရှိတော့တာဟာ ဥပမာတဈခုပါ။
ဘနျကောကျကနပွေီးတော့ ဟနှိုငျးကို ကားစဈဆေးမှုတှကေို ထိုငျးမှာလာလုပျဖို့ သွဂုတျလအတှငျး ကမျးလှမျးခဲ့တယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ ထိုငျးနဲ့ အငျဒိုနီးရှားဟာ ဗီယကျနမျနိုငျငံကို ကားတငျပို့မှုတှေ သွဂုတျလအတှငျးမှပဲ ပွနျလညျလုပျဆောငျလာခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကုနျခအြပွီး စဈဆေးမှုတှကေတော့ ရှိနဆေဲဖွဈတဲ့အပွငျ စဈဆေးခြိနျကလညျး တဈလလောကျကွတတျတာဟာ တငျပို့မှုတှကေို အဟနျ့အတားဖွဈစဆေဲပါပဲ။
ဒီလိုအခြိနျမှာ ထိုငျးနိုငျငံကတော့ ပွညျတှငျးကနထေုတျလုပျတဲ့ hybrids တှ၊ လြှပျစဈကားတှနေဲ့ အခွား လြှပျစဈနယျပယျကကားတှအေတှကျ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈကတညျးက အခှနျလှတျငွိမျးခှငျ့နဲ့ မိတျဆကျပေးခဲ့ပွီးသား။ ဒီနရောမှ အခြို့သော အဓိကအစိတျပိုငျးတှဖွေဈတဲ့ မျောတာနဲ့ လြှပျစဈဘကျထရီတှကေိုတော့ ပွညျတှငျးကနပေဲ ထုတျလုပျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒီလို အတိုငျးအတာတှဟော ကားတငျသှငျးမှုတှအေတှကျတော့ ဆိုးကြိုးဖွဈစခေဲ့တယျ။
ဘေးကငျးလုံခွုံရေးနဲ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ မူဝါဒတှဟော ကားတငျသှငျးမှု ကနျ့သတျရေးအပါအဝငျ စေ့စေ့စပျစပျဆှေးနှေးခွငျးအဆငျ့မှာရှိနပွေီး မကွာမီထှကျပျေါလာတော့မှာပါ။ U.S. ကုနျသှယျရေးကိုယျစားလှယျရုံးရဲ့ကတော့ ဂပြနျကားလုပျငနျးမှာလညျး စညျးကွပျခှနျမဟုတျတဲ့ အတားအဆီး အခြို့ သတျမှတျသှားဖို့ရှိတယျဆိုပွီး မတျလအတှငျးက ပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။
"အမြိုးသားကောငျးစားရေး ကုနျသှယျမှုမူဝါဒကို လှတျလပျစှာကငျြ့သုံးခွငျးအားဖွငျ့ နောကျဆုံးမှာ တဈသီးပုဂ်ဂလအဖှဲ့ဝငျတှအေနနေဲ့ရော ASEAN ဒသေတှငျးတဈခုလုံးပါ မျောတျောကားလုပျငနျး ကဏ်ဍနဲ့ပတျသကျပွီးအပိုငျးပိုငျးကှဲတာတှေ အကြိုးထိရောကျမှုမရှိတာတှနေဲ့ ကွုံတှေ့ကွရလိမျ့မယျ" လို့ Oxford စီးပှားရေးမှ ဗွိတိသြှ သုတသေန ကုမ်ပဏီကနပွေီး ASEAN ဒသေတှငျး မျောတျောကားလုပျငနျးမှ စညျးကွပျခှနျမဟုတျတဲ့ အတားအဆီးတှေ ဆိုတဲ့ အစီရငျခံစာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒသေတှငျးက ခေါငျးဆောငျတှကေတော့ သတိပေးမှုတှကေို မကွားဟနျဆောငျနဆေဲပါပဲ။
(ယခုသတငျးဆောငျးပါးမှာ Nikkei Asia တှငျ ဖျောပွထားသညျ့ Southeast Asia seeks ways to protect car industry? ဆောငျးပါးကို CarsDB ၏ managing editor ဦးစညျသူကျြောမှ ဘာသာပွနျထားခွငျးဖွဈ ပါသညျ။)